Maamulka Puntland oo Ciidamo kala dhex-dhigtay maleeshiyaad dagaalamay
Home Wararka Somaliya Maamulka Puntland oo Ciidamo kala dhex-dhigtay maleeshiyaad dagaalamay
Dowlad Goboleedka Puntland ayaa ku guuleystay in uu kala qaado laba Maleeehiyo Beeleed oo maalmihii la soo dhaafay dagaalo culus ay ku dhexmarayeen degaanka Saax-Maygaag ee Gobolka Sool.
Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Puntland ayaa booqday degaankii lagu dagaalamay, waxaana iyaga oo kaashanay Odayaasha Dhaqanka ay fuliyeen amarkii ka soo baxay Puntland ee ahaa in laga guuro dhammaan dhulka lagu dagaallamay.
Sidoo kale Maamulka Puntland ayaa geeyay degaanka lagu dagaalamay ee Saax-Maygaag Ciidamo hubeysan, kuwaas oo halkaasi u tegay dhaqan gelinta Amarkii kasoo baxay Xukuumadda Puntland iyo joojinta Colaada labada maleeehiyo Beeleed.
Ugu dambeyn Xukuumadda Puntland ayaa mamnuucday in wax degaamayn ah laga sameeyo dhul-daaqsimeedka Saax-Maygaag iyo Sange-jebiye, si loo xakameeyo colaadda ku salaysan muranka dhuleed ee u dhexaysa labada dhinac, kuwaas oo ah kuwo soo laab laabtay.
Degaano ka tirsan Gobolka Sool ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay dagaal Beeleedyo, hayeeshee intooda badan ay xal ka gaareen Maamulada Puntland iyo Somaliland oo kala maamulo degaano ka tirsan Gobolkaasi Sool.
Previous articleGudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo Magacaabay Xubnaha Guddiga Qaban qaabada Doorashada Galmudug
Next articleTaliska Ciidanka Galmudug iyo kuwa Dowlada oo war kasoo saaray in Dagaalka uu sii Soconayo